Wasiirka amniga “Inaan jiifanno yaan nalaga sugin, waqti walbo kormeer ayaan wadeynaa..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiirka amniga “Inaan jiifanno yaan nalaga sugin, waqti walbo kormeer ayaan wadeynaa..”
Wasiirka amniga qaranka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay inay xoojinayaan sugista amniga guud ee magaalada Muqdisho, ayna la dagaallamayaan cid walbo oo amni xumo wadda.
Wasiirka ayaa sheegay in lala xisaabtami doonno dhammaan saraakiisha ciidamada ammaanka darajo walbo oo uu haysto, wuxuuna tilmaaamay in markaan la gaaray waqtigii nabadda lagu soo dabaali lahaa Soomaaliya.
Sidoo kale wasiirka ayaa faray ciidamada ammaanka iney ka fogaadaan wax walbo oo dhibaato ku ah ammaanka guud ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena waxa uu wada shaqeyn ka dalbaday shacabka.
“Inaan jiifanno yaan nalaga sugin, waqti walbo kormeer ayaan wadeynaa, taliye iyo taliye ku-xigeenno ogaada waa la idiinla xisaabtamayaa, ciidamada ammaanka waxaan ka codsanayaa iney la shaqeeyaan shacabka” Sidaas waxaa yiri wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray wasiir Islow ayaa imaanaya xilli maalmahaan dambe uu wasiirka waday isbedallo ballaaran oo uu ku sameynayo talisyada ciidamada booliiska Soomaaliyeed.